GXT 540C Yula: Trustpad's gamepad oo hada la heli karo | Wararka Gadget
Eder Esteban | | Consolas, Guriga
Xulista ciyaarta ciyaarta ee hadda ka socota suuqa ayaa sii kordheysa. Sidaa darteed, xulashada boodhadhka ciyaarta ee ku habboon baahiyahaaga ayaa noqon kara mid aad u tiro badan oo kala duwanaansho iyo qiime kala duwan ah, tayada iyo qaabeynta. Trust Gaming waa mid ka mid ah sumadaha leh joogitaanka ugu weyn ee qaybtan suuqyada waxayna hadda naga tagayaan iyaga gamepad cusub. Kani waa daabacaadda 'GXT 540C Yula camo', oo la socota fiilo mitir 3 ah oo lagu daray.
Tani GXT 540C Yula camo daabacaadda se oo loo soo bandhigey inay tahay mid tayo leh oo shaqsiyaddeeda leh Waxaa lagu iibiyaa qiimo jaban. Ka sakow noqoshada moodello badan, waxay leedahay naqshad ergonomic ah oo loogu talagalay inay ku siiso dadka isticmaala raaxada ugu badan markay isticmaalayaan.
Sida ay sheegtay shirkadda lafteeda, GXT 540C Yula waa loogu talagalay kalfadhiyo adag oo dheer, kuwaas oo loo sameeyay si macquul ah oo macquul ah mahadnaqooda qaabaysan. Waxaad si buuxda naftaada ugu quusin kartaa ciyaarta saacado badan: naqshaddeeda ergonomic iyo daahan caag ah ayaa hubinaysa xajin adag oo raaxo leh marwalba.
Intaa waxaa sii dheer, waa boodhadh ciyaar siiya fursado badan, tan iyo markii ay la timid wadar ahaan 13 badhan, laba joysticks analog, iyo guddi xakamaynta dhijitaalka ah. Waxaas oo dhami waxay ka caawinayaan inay ka dhigaan qaabkan mid sifiican ugu habboon kal-fadhiyada ciyaaraha dheer. Iyada oo damaanad qaadka Trust Gaming ee arrintan la xiriira.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka GXT 540C Yula waa iswaafajinta dhammaan noocyada ciyaaraha. Maaddaama aysan macno lahayn cinwaanka aad ku ciyaarayso ama qalabkee. Waxaa loo soo bandhigay inay tahay hubka ugu fiican ee dhammaan dagaallada. Waad ku mahadsan tahay gelitaanka tooska ah / furaha X-gelinta, waxaad si buuxda ugu lug yeelan kartaa ciyaar kasta. Ku raaxayso waayo-aragnimada ay leedahay xakamaynta cadaadiska xasaasiga ah iyo badhanka "garabka" analogga ah ee PlayStation-kaaga 3. Waxaad awoodi doontaa inaad ku ciyaarto laptop-kaaga iyo PC-gaaga weligood.
GXT 540C Yula camo daabacaadda Horeba waa loo iibiyaa qiimo la soo jeediyey oo ah € 30,99. Si aad wax badan uga ogaato gamepad-ka iyo alaabooyinka kale ee sumadda, waxaad booqan kartaa boggeeda rasmiga ah, xiriirkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Consolas » GXT 540C Yula camo edition by Trust Gaming: Ciyaarta ugu badan ee suuqa laga helo